Yega Wiper Nereza
Multifunctional Wiper Nereza
Kumashure Wiper Nereza
TRUCK & BHASI WIPER chipande
Yese Wiper Blade
Ningbo Chinahong Traffic Equipment CO., Ltd. (NingBo IDA Auto Zvikamu Co, Zvishoma) webhusaiti iri online
Ningbo Chinahong Traffic Equipment CO., Ltd. (NingBo IDA Auto Zvikamu Co, Zvishoma) webhusaiti yakatangwa. Vashambadzi vanogamuchirwa kuti vauye kuzobvunza nekutenga. Kambani yedu ine nyanzvi yekugadzira ma wiper emota uye zvishongedzo kwemakore gumi neshanu, ine goho regore rezvimwe zvitatu ...
Wiper yekuchengetedza gwara?
1. Paunenge uchishandisa chipukuta kubvisa guruva pamusoro pechidziro chemhepo pazuva rine zuva, iva nechokwadi chekumwaya mvura yegirazi, kwete kuoma. 2. Kune imwe yakasindimara uye yakaoma ivhu pagirazi, iyo inofanirwa kucheneswa nemaoko. Izvi zvinhu zvinogona kukuvadza zvisviniro banga uye kukonzeresa iro rechipfuva kusaburitsa ...
Ndedzipi mhando dzemapukuta?
Kune angangoita maviri marudzi ema wiper. Imwe ndiyo yechinyakare inopindirana inopukuta, inova inonyanya kufutwa. Pane nhanho nhatu kana ina, dzinogona kugadziriswa nemutyairi zvinoenderana nemvura uye mamiriro ekuona; imwe inzwa inonaya mvura. , Inonyanya kushandiswa pakati nepamusoro soro ...
Runhare+86 574-8655 0966
KeroMinlian Village, Guisi Street, High-Tech Dunhu, Ningbo Guta, Zhejiang Province, China
Yega Wiper Nereza, Bhazi Wiper Nereza YeVolvo, Ford Edge Rekupedzisira Wiper Nereza, Yakakosha Type Wiper Nereza, Windscreen Wiper Yemota, Windshield Kumashure Wiper,